Moneygram UK Xeerarka kuubanka
Qaado $ 3 Lacag U dirista Guatemala, Honduras & El Salvador Dooro hab fudud oo lacag lagu kala wareejiyo markaad isticmaaleyso MoneyGram UK. Meel kasta oo qoyskaaga iyo asxaabtaadu ku nool yihiin adduunka oo dhan, MoneyGram UK waxay samaysaa way ka sahlan tahay sidii hore si loogu wareejiyo lacag caddaan ah, xitaa haddii aysan haysan koonto bangi. Kaliya u dir lacagtaada internetka ama qof ahaan goobaha ku habboon UK oo dhan.
Ka qaado $ 2 Off $ 50 + Iibsashadaada Waxaan haynaa 23 moneygram.co.uk Xeerarka Kuubboon laga bilaabo Luulyo 2021 Qabso rasiidh bilaash ah oo lacag keydi. Heshiiskii ugu dambeeyay waa Heshiisyada MoneyGram ee Gaarka ah iyo Bixinta Maarso 2020.
$ 2 Kharashka Macaamilkaaga - Macaamiisha Cusub Kaliya Kuubannada MoneyGram UK waxay ka caawiyaan macaamiisha inay dalbadaan qaybtooda heshiisyada Kuuboonada ee MoneyGram UK. Dukaanku wuxuu leeyahay degel wanaagsan iyo sidoo kale daboolis madal warbaahinta bulshada oo iskutallaabtu hubinayso farsamooyinkeeda iyo farsamooyinkeeda casriga ah, haddii laga hadlayo habka caadiga ah markaa tiirkaas ayaa sidoo kale la calaamadeeyay maxaa yeelay dhiirrigelinta dukaanka ayaa sidoo kale la fulinayaa iyadoo la adeegsanayo xayeysiisyada TV -ga iyo hababka caadiga ah ee boorarka.
Bixiyaha Lacagta ee 'MoneyGram' ee Mareykanka ee tooska ah, ka hel $ 2 Lacagta Macaamiladaada Ku soo dhowow boggayaga lambarrada foojarka MoneyGram, sahamin qiimo -dhimisyadii iyo heshiisyadii ugu dambeeyay ee moneygram.com ee July 2021. Maanta, waxaa jira wadar ahaan 9 foojarro MoneyGram iyo heshiisyo dhimis. Waxaad si dhakhso leh u shaandhayn kartaa furayaasha foojarka MoneyGram ee maanta si aad u hesho dalabyo gaar ah ama la xaqiijiyay.
Hesho $ 2 Lacag Iibsashada Iibsashadaada Xeerarka dhimista MoneyGram ee aad hadda seegtay. 20% ka baxsan Khidmadaha MoneyGram. Waxay ku egtahay Jul 31, 2021. Lacag laguma wareejiyo MoneyGram. Waxay ku egtahay Jun 27, 2021. 229 Xeerarka Sicir -dhimista iyo Heshiisyada Maaliyadda.
Ka hel 30% Kharashka Wareejinta U dhaqso dalabka waqtiga xaddidan: 15% DAMI dalabkaaga adoo adeegsanaya koodh kuubboonada MoneyGram UK. Ka iibso qalbigaaga oo ku raaxayso sicir -dhimista ugu badan ee alaabada la xushay ee Kuuboonada MoneyGram UK. Haddii aad in muddo ah isha ku haysay, hadda waa waqtigii aad iibsan lahayd.
Ku raaxayso Khidmadaha 20% Ku keydi Koodka Xayeysiiska Moneygram & kuubannada qiimo dhimista iyo koodhadhka xayeysiinta ee Luulyo, 2021. Sicir -dhimista ugu sarreysa ee Moneygram ee maanta & sicir -dhimista koodhadhka dhimista: Aan gujinno jiirkaaga! Dukaankani wuxuu bixiyaa iibin iyo qiimo dhimis gaar ah!
Ku keydi $ 8 Amarkaaga Ku kaydi Moneygram 8 Koodh -lambarka Lambarada & kaadhadhka xayeysiiska iyo kuubannada iyo koodhadhka xayeysiinta ee Luulyo, 2021. Qiimaha ugu sarreeya ee Kuubannada Code -ka Lambarrada Lambarada & Koodhadhka Lacag -dhimista: Aynu gujinno jiirkaaga! Dukaankani wuxuu bixiyaa iibin iyo qiimo dhimis gaar ah!
Ka qaad 40% Lacagaha Xawilaadda Ku keydi mid ka mid ah kuubannadayada MoneyGram ee ugu sarreeya Ogosto 2021: 40% Off. Soo ogow 21 la tijaabiyey oo la xaqiijiyey Xeerarka Xayeysiiska MoneyGram, waxaa iska leh Groupon.
MoneyGram Cyber ​​Isniinta Bixiya: Ka hel $ 2 Kharashka Macaamilkaaga Ku soo dhowow boggayaga ku -meel -gaarka ah ee MoneyGram, sahamin qiima -dhimisyada iyo xayeysiisyada moneygram.com ee ugu dambeeyay ee la sameeyay Ogosto 2021. Maanta, waxaa jira wadar ahaan 10 rasiidh MoneyGram iyo heshiisyo dhimis. Waxaad si dhakhso leh u shaandhayn kartaa koodhadhka xayeysiinta ee MoneyGram maanta si aad u hesho dalabyo gaar ah ama la xaqiijiyay.